के हुनसक्छन् ओलीका दुई विकल्प ? - दर्पण संसार
के हुनसक्छन् ओलीका दुई विकल्प ?
२०७७ फाल्गुन १२, बुधबार १४:३२ बजे
काठमाडौं (जीएनएन)सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक समस्यामा परेका छन् ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै सदर गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक विवाद ११ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै साम्य भएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक र संवैधानिक विषयले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा पनि नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको त्रिपाठीको विश्लेषण छ । ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभई राष्ट्रपतिको विषयमा पनि कुरा उठ्छ, त्यसैले राष्ट्रपतिले पनि सोच्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिदैनन् । उनी संसदमा नै शक्ति परीक्षण गर्ने तयारीमा छन् ।
‘बदलिएको परिस्थितिमा अब संसदले नै नयाँ सरकार बनाउने छ। सरकार गठनका लागि संसदले आफै कार्यसूची बनाउन सक्छ र संभावनाका आधारमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका जुनसुकै उपधारा पनि आकर्षित हुन सक्ने छ’ त्रिपाठीले भने।